I-SugarmonVillas Mt Souf Ifanelekile Ngokubuka Okumangalisayo!
I-Sugarmon Villas igqugquzelwe "I-French Colonial Architecture" ngokugcina isiko lethu lesiFulentshi lezikhathi ezedlule. Sinikeza umoya opholile wakudala kuyilapho sinikeza zonke izinsiza ezibalulekile zesimanje. Umsingathi wethu ngenkathi etholakala ukuhlinzeka ngesevisi ye-concierge yochwepheshe ekusiza nganoma yimiphi imibuzo nemisebenzi ongase ubhekane nayo. Le suite iza ne-Pergola Balcony yakho enombono omangalisayo we-Soufriere!
Ama-suites ethu "acashile kodwa aklanywe ngokunambitheka" njengoba ecashunwe umphathi wehhotela lesifunda osethathe umhlalaphansi futhi ethi "amagumbi akho angcono kunamanye amahhotela ake waya kuwo". Ngenkathi kusekelwe embonweni yilokho okusenza sikholwe ukuthi uzokujabulela ukukhetha kwakho ukuhlala eSugarmon!
I-New Development Soufriere iyindawo yokuhlala enokuthula nebukekayo. Sitholakala endaweni ebizwa ngokuthi "i-Beverley Hills" ngenxa yokuthi iyindawo yokuhlala enhle kakhulu eSoufriere! Omakhelwane abanobungane bayibhonasi eyengeziwe! :)
Usokhaya wethu uzohlonipha bonke ubumfihlo kanye nezinketho zokuguquguquka komphakathi kodwa sihlala simagange ukuletha izicelo zakho kanye nemibuzo.